ChiSpanish chimiro turkey ham | Kicheni Mapepa
Spanish turkey ham
Tony Torres | | Spanish Cuisine, Nyama Recipes
Nhasi ndinokuunzira iri nyore uye chikafu chinonaka cheSpanish turkey ham. Chikafu chiri nyore kugadzirira, chine zvishandiso zvishoma uye chakanakisa, chakaderera kwazvo mumafuta. Mushure memazororo, isu tese tinowanzotanga gore rizere nevavariro dzakanaka maererano nehupenyu hwakanaka uye kudya. Asi kazhinji, isu tinofunga kuti hutano hwakanaka hwakavakirwa pane zvinofinha uye zvisingafadzi madhishi.
Huye, turkey nyama yakaderera-mafuta, saka nekusarudza yakanaka yekugadzirira nzira, unogona kuwana dhishi rinonaka uye rine hutano. Iyo turkey hams ndeimwe yeakanakisa zvidimbu zvemhuka iyi, pamusoro pezvo, isu tichaibika muchoto uye nekudaro isu tichawana kunhuwirira kwayo tese tisinga wedzere mafuta mundiro. Sedivi, iwe unogona kuwedzera imwe yakabikwa mbatatisi uye yakanaka yakasvibirira saladhi.
Spanish huku nyama
Recipe mhando: Breakfast breakfast
Nguva yekugadzirira: 15 M
Kubika nguva: 60 M
Nguva yakazara: 1 h 15 min
4 turkey hams
1 wepakati anyanisi
4 clove yegariki
Madomasi 2 akaibva
imwe mhandara yemafuta emuorivhi
girazi rewaini chena
Kutanga, isu tichaenda kugeza iyo turkey hams chaizvo, yakaoma nepepa rinopinza uye chengetwa.
Zvino, isu tinofanirwa kutema hanyanisi negariki zvakanaka kwazvo.
Bvisa matomatisi uye cheka mumakumbo madiki.
Tiri kupisa choto kusvika pamadhigirii zana nemakumi masere isu tichipedzisa kugadzirira sosi.
Mune dhishi rekufungidzira tinoisa hanyanisi, gariki uye matomatisi uye sanganisa.
Mwaka iyo turkey hams, wedzera kubata kwe thyme uye kudonhedza kwemafuta emuorivhi.
Nemaoko akacheneswa-zvakanaka, tinonyatsoisa nyama yese pamwe nezvinonhuwira.
Zvino, isu tinoisa ham mune sosi pamubhedha wemiriwo.
Pekupedzisira, tinodiridza negirazi rewaini chena uye toisa muchoto.
Pheka kwemaminitsi makumi maviri nemashanu, mushure menguva iyoyo, dzosera nyama pamusoro uye ubike zvekare kwemimwe maminetsi makumi maviri nemashanu kana zvakadaro.
Iyo turkey inofanirwa kuve yakasungwa zvakanaka kunze.
Kuti uve nechokwadi chekuti yakabikwa zvakanaka, unogona kucheka nyama.
Kuti uone kuti mukati meTurkey yakanyatso kubikwa, iwe unofanirwa kuseta ovhoni kune yepakati yakanyanya kupisa. Kana iwe uine nguva, unogona kuibika pane angangoita 140 degrees. Zvinotora nguva yakareba kuti uve wakagadzirira, asi ichave yakawanda juicier.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Zvidyo » Nyama Recipes » Spanish turkey ham
Almond uye coconut simba mabhora
Marinated uye akakangwa huku mapapiro